PressReader - Ilanga: 2017-10-05 - Isimi ngomumo ekaGonya noTete e-England
Isimi ngomumo ekaGonya noTete e-England
Ilanga - 2017-10-05 - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE
UGCINE eyisayinile uSiboniso “Tiger” Gonya inkontileka yokuphonsela inselelo uZolani “Last Born” Tete oyingqwele yeWorld Boxing Organisation (WBO) Bantamweight empini ezokuba mhla zili-18 kuLwezi (November) eSSE Arena, eBelfast, e-United Kingdom.
Ikhempu kaGonya ibigoloza ukusayina inkontileka yokuqala ethunyelwe nguFrank Warren onguphromotha odumile waseEngland. UGonya bekuthiwa uzinze eNamibia kule nkontileka yokuqala. UWarren uthumele inkontileka enemininingwane eqondile kaGonya futhi kucaciswe kahle ngemali azoyithola ngokuba yingxenye yale mpi.
Kule nkontileka entsha kubekwe kwacaca ukuthi uWarren uzohambisa abantu abane ekhempini kaGonya. Kulabo bantu kubalwa uThulani “Nkunzi” Magudulela ohlela izimpi zikaGonya, uGonya, uZwi Magudulela noSizwe Mthembu abacija leli bhokisa.
Le mpi bekumele ibe kuleli njengoba womabili la mabhokisa kungawaseNingizimu Afrika. Nokho kuphoqelekile ukuthi isingathwe phesheya kwezilwandle ngenxa yokuntuleka koxhaso. Izimpi zikaTete zihlelwa nguWarren kanti noGonya uma enganqoba le mpi izimpi zakhe ezine ezilandelayo zingahlelwa yilo phromotha.
Impi kaGonya noTete isikhona ohlwini lwezimpi ezihlelwa nguWarren kanti izoboniswa bukhoma kwiBT Sport nakwiBoxNation. UTete ucashunwe ekucacisa ukuthi ngeke abe nalo uzwelo kuGonya. Uthi ubefisa ukuthi le mpi ibe seMonti noma eThekwini ngoba bobabili badabuka kuleli. UTete uvundululwe nguMzimase Mnguni we-Eyethu Boxing Gym onobudlelwano obude noThulani ohlela izimpi zikaGonya.